Cilmibaaris: Saameynta COVID-19 ku yeeshay Waxbarashada Aas-aasiga iyo Midda Sare ee Soomaaliya | Jowhar Somali news Leader
Home News Cilmibaaris: Saameynta COVID-19 ku yeeshay Waxbarashada Aas-aasiga iyo Midda Sare ee Soomaaliya
Cilmibaaris: Saameynta COVID-19 ku yeeshay Waxbarashada Aas-aasiga iyo Midda Sare ee Soomaaliya
Xarunta Xayaat ee Cilmibaarista iyo Tababbarada Hoggaamineed ayaa soo bandhigtay cilmibaaris ku saabsan “saameynta COVID-19 ku yeeshay waxbarashada asaasiga iyo midda sare ee Soomaaliya”; gaar ahaan Gobolka Banaadir.
Cilmibaaristaan oo la diyaariyay 29-Maarso ilaa 15-Julaay 2020 ayaa waxaa xog laga uruuriyay 274 maamule oo ka howl-gala Gobalka Banaadir, ahna muunad laga qaatay 942 Iskool oo ku yaal Gobalka Banaadir. Maamulayaasha ayaa waxaa la waydiiyay 6 suu’aalood oo ka jawaabayay saameynta dhabta ah ee gaartay waxbarashada asaasiga iyo midda sare waxayna kala ahaayeen:
1. ilaa heerkee ayuu COVID-19 saameyn dhaqaale ku yeeshay Iskoollada. 2. Saameynta COVID-19 ku yeeshay waxqabadka maamullada Iskoollada. 3. Inta uu la egyahay dhibka soo gaaray macallimiinta. 4. Sida COVID-19 u saameeyay howlaha waxbarashada ardayda. 5. Manhajka waxbarashada iyo sida COVID-19 u saameeyay. 6. Saameynta COVID-19 ku yeeshay Bii’ada waxbarashada
COVID-19 wuxuu saameyn ballaaran oo dhanka dhaqaalaha, waxqabadka maamulka, ardayda, macallimiinta iyo manhajka ku yeeshay waxbarashada asaasiga iyo midda sare.
91% Iskoollada ku yaal Gobalka Banaadir waxay ku tiirsanyihiin dhaqaalaha ay ka helaan ardayda, halka tiro yar oo ka tirsan Iskoolladaas ay maalgaliyaan Dowladda, Hay’ado gudaha iyo kuwo caalami ah.
Kahor COVID-19, qiyaastii $10, 000 ayaa Iskool kasta soo gali jirtay biskasta
Iskoollada Gobolka Banadir waxay khasaareen 87% dhaqaalaha kor ku xusan. Iskoolladu waxay bilkasta khasaareen sideed milyan boqol sagaashan iyo shankun iyo afar boqol oo doolar $8,195,400, halka 4bilood (Maarso-Juun) ay khasaareen soddon iyo labo milyan toddobo boqol siddeetan iyo kow iyo lix boqol $32,781,600
Iskoolladu ma aysan laheyn wax qorsho ah oo ay uga hortageen COVID-19
Qiyaastii 226,896 arday ayaa waxbarasho la’aan ku dhacay intii uu jiray COVID-19
Qiyaastii 4,110 oo macallimiin ah ayaa shaqo la’aan ku meel gaar ah ku dhacay
Iskoollo badan ayaa ku xirmay inta lagu jiray COVID-19 iyadoo khasaaro ba’an ay soo gaartay maamulladii Iskoolladaas.
Tallooyinka ugu muhiimsan ee ka soo baxay cilmibaarista
Iyadoo la tixraacayo najiijadii ka soo baxday cilmibaarista ayaa Xarunta Xayaat waxay soo jeedinaysaa tallooyinka soo socda:
Inta badan Iskoollada ma aysan laheyn qorsho ay uga hortagaan dhibaatooyinka soo wajaha waxbarashada, sidaas darteed, waxaan ku talinaynaa in Maamullada Iskoollada iyo Dalladaha ay layimaadaan qorsho ka hortag ah oo lagu xallinayo dhibaatooyinka waa weyn ee ku yimaada waxbarashada sida: COVID-19
Waxaan soo jeedinaynaa in Agaasinka waxbarashada Gobalka Banaadir ay diyaariyaan qorsho falcelin deg deg ah (Response plan) iyaga oo lakaashanaya Wasaaradaha Waxbarashada iyo Caafimaadka
Waxaan kula talinaynaa Dowladda Soomaaliya in ay taageero deg deg lagaarto waxbarashada asaasiga iyo midda sare oo dhaawac ballaaran soo gaaray si loo badbaadiyo jiilasha waxbaranaya
Waxaan soo jeedinaynaa in Iskoollada iyo dhammaan bahda waxbarasha ay horumariyaan nidaam waxbarasho oo ku saleysan tiknoollayijada casriga ah si looga fogaado in ay waxbarashadu markale istaagto
Si loo xoogijo tayada waxbarashada Soomaaliya, waxaan Wasaarada waxbarashada kula talinaynaa in ay kormeeraan dhaqangallinta manhajka waxbarashada
Xarunta “Xayaat” ee Cilmibaarista iyo Tababbarada Hogaamineed waxay diyaar u tahay ay ka qaybqaadato fullinta iyo dhaqagallinta tallooyinka ku xusan cilmi-baaristaan.
Cilmi baarista oo faahfaahsan kuna qoran “English language” ka aqriso webka Xarunta Xayaat: hayatcenter.so